स्वास्थ्यको लागि चिप्ले भिन्डी खानुका फाइदाहरु
मे 5, 2019 मे 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments चिप्ले भिन्डी, डा. राम बहादुर बोहरा, स्वास्थ्य
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चिप्ले भेन्डी निकै महत्वपुर्ण देखिन्छ । यतिबेला चिप्ले भिन्डीको मौसम सुरु भएको छ । लेडी फिङ्गर अर्थात चिप्ले भिन्डीको पकवान अनेक हुनसक्छ । मलाई मनपर्ने सब्जीमा चिप्ले भेन्डी पनि एक हो ।
यसलाई उसिनेर खान सकिन्छ, तरकारीको रुपमा खान सकिन्छ । यो निकै स्वादिलो सब्जी हो, जो स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक मानिन्छ । अन्य तरकारीको तुलनामा यो धेरै स्वादिष्ट हुने हुनाले धेरैजसो भान्सामा भेन्डी पाकेको देख्न सकिन्छ ।
फर्सी खानुका फाइदाहरु
सामान्य तरकारीको रूपमा सेवन गर्न सकिने भेन्डीमा पनि आन्द्रामा हुने कोलोन क्यानसरबाट फैलन सक्ने बिषालु तत्वलाई हटाउने क्षमता भिन्डिमा छ भन्ने कुरा अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ ।
कतिपयले भेन्डी मन नपराउने गरेको पाइन्छ । यस्तै यस्तै बानीका कारण मानिस थुप्रै रोगको सिकार भएको देखिन्छ । भिन्डीमा प्रोटीन, क्याल्शियम, वोसो, कार्बोहाइड्रेड, सोडियम र फलामका साथै फोस्फोरस जस्तो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
भिन्डीको सेवन नित्य गर्नेहरुको केस लामो सामयसम्म कालो र घना हुन्छ । यसले शरीरमा बढ्ने बोसोलाई समेत घटाउँछ, जसको कारण पेटमा अतिरिक्त बोसो लाग्दैन र तौल नियन्त्रण हुन्छ । मानिसको सवैभन्दा ठूलो रोग वोसो हो बोसो बढ्न नदिन चिप्ले भेन्डीले मदत्त गर्दछ ।
हरियो भिन्डीमा रहेको आइरन तत्वले हाम्रो शरीरमा निकै फाइदा पुर्‍याउँछ । यसले रगतमा हेमोग्लोबिन निर्माण गर्छ, जसले तपाईलाई एनीमियाबाट बचाउँछ । यसका साथै भिन्डीमा रहेको भिटामिनले रक्तश्राव रोक्न सहयोग गर्छ ।
← यस्तो छ विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको लागि आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा
आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिने →
फ्रेवुअरी 1, 2020 साइन्स इन्फोटेक 1
सेप्टेम्बर 16, 2019 सेप्टेम्बर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
4 thoughts on “चिप्ले भिन्डी खानुका फाइदाहरु”
Pingback:स्वास्थ्यमा लागि वियरका फाइदाहरु र वेफाइदाहरु